‘कबिर सिंह’ सहिदकालागि कति महत्वपुर्ण ?
बलिउड अभिनेता साहिद कपुर एक समयका निकै डिमान्डेड अभिनेता हुन् । चलचित्रमा उनले दिने फरक प्रस्तुतीका कारण उनका फ्यानफलोवर्स अत्याधिक मात्राका हुने गर्थे । तर उनी बिवाहपछि चलचित्र वृत्तमा अक्काझुक्कल मात्र दखिने गर्छन् ।
हाल साहिद आफू अभिनित नयाँ चलचित्र ‘कबिर सिंह’को प्रचारमा व्यस्त छन् । लबस्टोरी फ्लेवरको यस चलचित्रको केही दिनअघि सार्वजनिक गरिएको ट्रेलरले दर्शकलाई हल सम्म तान्ने निश्चित भईसकेको छ । ट्रेलरमा साहिदको अभिनयलाई दर्शकले निकै रुचाएका छन् । यतिबेला उनको चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ ।
कबिर सिंह’को प्रचारका क्रममा उनले आफू बेरोजगार रहेको बताएका छन् । यस चलचित्रपछि आफूलाई हालसम्म कुनै पनि अन्य चलचित्रको अफर नआएको साहिदले बताएका छन् । कलाकारको रोजगार भनेकै चलचित्र हो । के ‘कबिर सिंह’मार्फत उनले बलिउडमा सफल कमब्याक गर्न सक्लान् ? प्रर्दशन पश्चात उनलाई अन्य चलचित्रमा अफर आउँला? यसको जवाफ ‘कबिर सिंह’को रिभ्यू र बक्सअपिस कलेक्शन अनुसार प्राप्त हुनेछ । तर ‘कबिर सिंह’को प्रर्दशन पश्चात चलचित्र विश्लेषकहरुले साहिदलाई चलचित्रको अत्याधिकमात्रामा अफर आउने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
आर्टिष्ट खबर/ चैत, काठमाडौं । अहिले संसारभरी फैलिरहेको कोरोना भाइरस बि
आर्टिष्ट खबर/ चैत, काठमाडौं । अहिले विश्वभरी महामारीको रुप लिदैँ फैलिर
‘विदेश जाने मायालु’मा आरिया र कुमारको अभिनय (भिडियो)